ချောအိမာန် (မန္တလေး): စီးဆင်းသွားတဲ့ မြစ်နှစ်စင်း
ကျွန်မ ကားမောင်းနေရာမှ အရှိန်ကို လျှော့လိုက်တယ်။ ခပ်ဝေးဝေးမှာကတည်းက လူစုစုနဲ့ မြင်နေရတာမို့ ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုဆိုတာတော့ သေချာနေတယ်။ ကားအသွားအလာကလဲ ပြတ်တဲ့နေရာမို့ ကျွန်မကားကို အမိအရ လှမ်းတားပုံရတယ်။ အချိန်က နောက်ကျနေပေမဲ့ ကျွန်မကားကို ရပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မနားကို အမျိုးသား နှစ်ယောက်ပျာပျာနဲ့ ရောက်လာတယ်။``ညီမရေ… ကူညီပါအုံး… ဒီမှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လို့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို ဆေးခန်းဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးပါနော်`` ကျွန်မ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လမ်းပေါ်မှာ ကောင်လေးနှစ်ယောက် တစ်ယောက်က လက်မှာ ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ သွေးထွက်နေတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်က ဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ စုတ်ပြတ်ပြီး ဒူးခေါင်းက ဒဏ်ရာက ဒဏ်ရာက သွေးထွက်နေတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး တော်တော် နာနေပုံရတယ်။ သူတို့စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်အကော့ကြီးကိုတော့ လမ်းဘေးထောင်ထားတယ်။ ကျွန်မက ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲခေါ်ပြီး ကျွန်မကားပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်။ ဆိုင်ကယ်ကို အခြား လူတစ်ယောက်က အိမ်ပို့ပေးလိုက်မယ်တဲ့။ ကျွန်မက သူတို့ကို ဆေးခန်းပို့ပေးပြီး အိမ်ပြန် ပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ သူတို့တွေအားလုံး အရမ်းကျေးဇူးတင်သွားကြတယ်။ ကျွန်မကားကို လာလမ်းအတိုင်းပြန်ကွေ့လိုက်တယ်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က ကားပေါ်မှာ တအားအားတကျွတ်ကျွတ်နဲ့ ပါလာတယ်။ မှန်ထဲကနေ ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်လုံး နားကပ်တွေနဲ့။ တစ်ယောက်က ရှေ့ဆံပင်အဖျားက မျက်စိပေါ် တဝဲဝဲကျနေတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က မျက်မှန်ကို သူ့ရဲ့ဆံပင် ထောင်ထောင်တွေပေါ် ပင့်တင်ထားတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့…. ။``နေမိုး ငါမကျေနပ်ဘူး၊ အဲဒီကားထဲက ကောင်တွေ့လို့ကတော့ အသေပဲ`` ``အသားလွတ်ချည်းကို ကပ်တိုက်သွားတာ ငါကားမှတ်မိတယ်၊ သိပ်ရှာစရာ မလိုပါဘူး။ နေနှင့်အုံးပေါ့၊ ရဲရင့်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ ငါသွေးထွက်သလို ပြန်ထွက်တာမြင်ရမှ ကျေနပ်မဲ့ကောင်ပါ````အား… နာလိုက်တာကွာ၊ ဆိုင်ကယ်ကလဲ အတော်ပြင်ရမှာ````ကျွတ်.. သွေးတအားထွက်တာပဲ… တဆစ်ဆစ်နဲ့ ဖြစ်လာပြီ၊ ကျိုးများသွားပြီလားမသိဘူး````မင်းတို့ နှစ်ယောက် ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား``ကျွန်မ အသံကြောင့် သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး အသံတိတ်သွားတယ်။ ``ဟို.. ကျွန်တော်တို့ နာလို့ပါ၊ အစ်မကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်ဆေးခန်း လိုက်ပို့မှာလဲ````ရှေ့ဆို ရောက်ပြီ``မြတ်တော်ဝင်ဆိုတဲ့ ဆေးခန်းရှေ့ရောက်တော့ ကားရပ်လိုက်တယ်။ ဆေးခန်းက ပိတ်ထားတာကြောင့် ကောင်လေး နှစ်ယောက်ကမဆင်းဘဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မ အိတ်ထဲက သော့ကိုထုတ်ပြီး ဆေးခန်.းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ``ကဲ ကိုယ်တော်တွေ ဆင်းကြလေ။ ဒီမှာ မင်းတို့ကို ဘယ်သူမှ တွဲချပေးမှာ မဟုတ်ဘူး`` ကျွန်မက ဆေးခန်းမီးတွေကို ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဂွမ်း၊ အရက်ပျံ၊ ကပ်ကြေး၊ ပတ်တီးလိပ်တွေကို ဘီဒိုထဲက ထုတ်လိုက်တယ်။ သူတိုကနှစ်ယောက်ကို ဆေးခန်းထဲ ခေါ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ ရောက်လာတယ်။ ကျွန်မကို ဆရာဝန် သိသွားချိန်မှာ အသံတွေတိတ်နေတယ်။ ခြေထောက်ခိုက်မိတဲ့ တစ်ယောက်က ပိုဆိုးတာပို့ ခုတင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြဲနေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို အထက်နားထိ ရောက်အောင် ကပ်ကြေးနဲ့ ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တယ်။ ဒူးခေါင်းတစ်ခုလုံးအပေါ်ယံအရေခွံတွေ ပွန်းပဲ့စုတ်ပြတ်နေပြီး ဒဏ်ရာထဲမှာ လမ်းမက ကျောက်မှုန့်သေးသေးလေးတွေ မြှုပ်ဝင်နေတယ်။ အရက်ပျံထည့်လိုက်တော့ စပ်လိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း။ မျက်နှာကို ရှုံ့မဲ့ပြီး တရှူးရှူးဖြစ်နေတဲ့ ကောင်လေးက ဆရာမ ဖြည်းဖြည်းဆိုပြီး မခံသာအောင် ဖြစ်နေတယ်။ ဂွမ်းများများကို အ၇က်ပျံထဲ နှစ်ထားလိုက်တယ်။ ဒုးခေါင်းမှာ ပေနေတဲ့ အနာဖတ်တွေကို အရင်ရေစွတ်ထားတဲ့ ဂွမ်းနဲ့သုတ်လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ လက်တွေက ခုတင်တန်းတွေကို အားနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ အ၇က်ပျံသုတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဆတ်တုန်လာတယ်။ တအားအားအော်ရင်း ချွေးတွေတောင်ကျလာတယ်။ အေးတဲ့ရာသီမှာတောင် ချွေးကျအောင် တခါတခါဖြစ်နေတဲ့ ကောင်လေးကို ဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ အနာကိုပဲ ဂရုစိုက်နေမိတယ်။ ဒါတောင် ဒုးခေါင်းမချုပ်ရတာတော်သေးတယ်။ ပတ်တီးစီးပြီး အားလုံးပြီးစီးသွားချိန်မှာတော့ ခုတင်ပေါ်မှာ လှဲပစ်လိုက်ပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ တော်တော်အီသွားပုံရတယ်။ နောက်တစ်ယောက်လက်က ဒဏ်ရာက သူ့လောက် အခြေအနေမဆိုး အော်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ်။ သောက်ဆေးပါ တစ်ခါတည်းပေးလိုက်တယ်။ ညကျရင်တော့ ကိုက်လာအုံးမှာပဲ အော်နေပေတော့ပဲ…. ``ကဲ မင်းတို့ ဧည့်ခန်းထဲ ခဏထိုင်အုံး``သူတို့နှစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲ သွားထိုင်ကြတယ်။``ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကို အတွင်းခန်းကနေ သေချာကြည့်နေမိတယ်````မင်းတို့အိမ်က လူကြီးတွေ စိတ်ပူနေမလား။ ဖုန်းဆက်ချင်ဆက်၊ ဖုန်းရှိတယ်။ ````ကျေးဇူးပဲ ဒေါက်တာ၊ ကိစ္စမရှိဘူး။ ခါတိုင်းဒီထက် အိမ်ပြန်နောက်ကျတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကလဲ ဝပ်ရှော့အပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ``မင်းတို့ကို ကားက တိုက်မိသွားတာလား````ကားက ကျွန်တော်တို့ နောက်က ကပ်လိုက်လာတာ ရှောင်လိုက်တာဘဲ၊ ဒါပေမယ့် သေချာကိုအလွတ်ကြီး တိုက်သွားတာ ငရဲမင်းဘယ်သူလို့ထင်လဲ````သီဟတို့ အုပ်စုများလား````ငါလဲ အဲဒီလို ထင်တာဘဲ၊ ဒီကောင်တွေက ငါတို့ကို မကျေနပ်နေတာ````အေး သူတို့ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်````မင်းတို့ သူတို့ကို တွေ့ရင် ပြန်ချမှာလား````ဘယ်နေမလဲဒေါက်တာ၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးဘဲ````ဘာအညှိုးရှိလို့လဲ````ရှိတာကတော့ ကျောင်းကတဲက အရင်ဦးသူ ညစ်နေတာပဲ````ဒီတစ်ခါတော့ မင်းတို့ ခံရတဲ့ အလှည့်ပေါ့````အလစ်ဝင်လာလို့ပါ။ နို့မို့ ဒီကောင်တွေ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီဒူးခေါင်းပြဲသွားသလို ဒီကောင် အရေခွံလဲ ပြဲအောင် ဆုတ်ပစ်မယ်````မင်းတို့ကို ဒဏ်ရာရအောင် လုပ် တဲ့သူတွေဆို ဒဏ်ရာပြန်ရအောင် လက်တုံ့ပြန်တက်သလား````လက်တုံ့မပြန်ရင် ကိုယ်ညံ့ရာ ကျသွားမှာပေါ့````ဟုတ်တယ်````ဒေါက်တာလဲ အဲဒီလို ခံယူချက်ရှိသလား````သိပ်ရှိတာပေါ့၊ ကျွန်မကိုလဲ ခံစားရအောင်လုပ်တဲ့ သူတွေဆို ပြန်ခံစားရစေချင်တယ်။ ကျွန်မရင်ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဒဏ်ရာရဖူးတယ်။ အဲဒီရဖူးတဲ့ ဒဏ်ရာအတွက် အခုထက်ထိ လက်တုံ့ပြန်ရသေးဘူး။ ကျွန်မ လက်တုံ့ပြန်ချင်တယ်။ မင်းတို့ကိုပဲ အကူအညီတောင်းရမယ်ထင်တယ်````ရပါတယ်၊ ဒေါက်တာက အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပဲ ဘယ်သူ့ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောပါ````ကျွန်မ မသိတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို လက်စားချေချင်တယ်`` ကျွန်မ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ပလပ်စတစ်နဲ့ သေချာထုတ်ထားတဲ့ အရာလေးကို ဖြည်လိုက်တယ်။ စတီးလိုလို အချွန်းလေးတွေပါတဲ့ပြတ်နေတဲ့ ဟန်းချိန်း လက်ကောင်တစ်ခု ကောင်လေးနှစ်ယောက်က စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မက လက်ကောက်လေးကို အဝေးက ပြရုံပြပြီး ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ``ဒီလက်ကောက်လေးက လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ကျွန်မလက်ထဲရောက်ရှိခဲ့တာပေါ့… အဲဒီလက်ကောက် ပိုင်ရှင်ဟာ ကျွန်မလက်စားချေချင်တဲ့ သူပဲ````ထူးဆန်းလိုက်တာ````မင်းတို့ စိတ်ဝင်စားရင် ပြောပြမယ်````စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပြောပြပါ ဒေါက်တာ````လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ကျွန်မစက်ဘီးနဲ့ အမေ့အိမ်က ပြန်လာတုန်းမှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက ကျွန်မကိုတိုက်သွားတယ်။ တိုက်မိသွားတယ်ပေါ့လေ။ ကျွန်မလမ်းမပေါ် ဘီးရောလူရော ပစ်လဲကျသွားတယ်။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကလူက ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ လှည်ကြည့်တယ်။ ဆိုင်ကယ်က စက်မရပ်ပေမဲ့ ရပ်နေတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ ထွက်ပြေးဖို့ကြံမှန်း ကျွန်မရိပ်မိသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မအားကုန်ထပြီး မီရာ နောက်ကလူရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်။ သူ့လက်ဖျားက ဟန်းချိန်းကကျွတ်ပြီး ကျွန်မလက်ထဲ ကျန်နေရစ်တယ်။ သူတို့ကတော့ ကိုယ်တိုက်ထားတဲ့သူကို ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်မရှိဘဲ လမ်းမမှာ ဒီအတိုင်းထားပစ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက် လူမဆန်တဲ့လူတွေလဲ။ ကျွန်မ ဆေးခန်းရောက်တော့ ညာဘက်လက်ကျိုးသွားမှန်း သိရတယ်။ ဒေါသကြောင့် ရင်ထဲက တဆစ်ဆစ်နာတာကို အပြင်အနာက မမီခဲ့ဘူး။ အဲဒီ လက်ကျိုးလိုက်တာကြောင့် ကျွန်မနိုင်ငံခြားသွားမဲ့ စာမေးပွဲကို နောက်တစ်နေ့ ဖြေလို့မရခဲ့တော့ဘူး။ ဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲ။ ကျွန်မဘဝနဲ့ရင်းပြီး အချိန်တွေ အပင်ပန်းခံခဲ့ရတာ၊ ဒီလိုမိုက်ရူးရဲ လူရမ်းကားတွေကြောင့် ရင်ထဲမှာ တဆစ်ဆစ်နာခဲ့ရတယ်။ အချိန်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ မင်းတို့နာကျင်တယ်ဆိုတာ အပေါ်ယံခံစားမှုလေးပါ။ ကျွန်မမှာ ငွေတွေအချိန်တွေ စွမ်းအင်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့၇တယ်။ အဲဒီလူတွေကို ကျွန်မလက်တုံ့မပြန်သင့်ဘူးလား````ပြန်သင့်တာပေါ့ ဒေါက်တာ````ဟုတ်ပြီ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မင်းတို့နှစ်ယောက် အကြံပေးပါအုံး````ဒေါက်တာက တွေ့ပြီလား````ရော့ ဒီလက်ကောက်လေးကို ပြန်ကြည့်ပါအုံး။ အဲဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လို ထိုးထားတဲ့ နာမည်အတိုကောက်ပါတယ်``ကောင်လေးနှစ်ယောက်က မျက်နှာပျက်သွားတယ်။ ဟန်းချိန်းလေးကို အသေအချာ ကြည့်နေတယ်။ ``အဲဒီ လက်ကောက်မှာ yy လို့ ထိုးထားတယ်။ ဘယ်သူလို့ထင်လဲ````ဟို….````ကျွန်မအထင်တော့ yy ဆိုတာ ရှင်တို့နှစ်ယောက်ထဲက ရဲရင့်ပဲ၊ နေမိုးဆိုတာလဲ အလိုတူအလိုပါပေါ့````ဗျာ````အဲဒီဟန်းချိန်းဟာ မင်းပစ္စည်းပဲ ပြန်စဉ်းစားပါအုံး။ မမှတ်မိနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ မင်းနောက်ကို လှည့်ကြည့်သွားသေးတယ်။ မင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုလဲ အသေအချာ မှတ်မိနေတယ်````ကျွန်တော်တို့ အကြောက်လွန်ပြီး ထွက်ပြေးကြတာပါ````သိပ်ကို လက်လွတ်စပယ်နိုင်လွန်းရာမကျဘူးလား။ မင်းတို့ကြောင့် သူတပါး ဒုက္ခရောက်တာကို ပစ်ထွက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီနေ့လို အခြေအနေမျိုးမှာ မင်းတို့ကို မကူညီဘဲ ပစ်ထွက်သွားနိုင်တယ်။ မင်းတို့ မှန်းသိနေတာကို ဒီထက်အများကြီး ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ပစ်လို့ရတယ်။ အေး .. ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ လူဆန်တဲ့စိတ်ကြောင့် မင်းတို့မှန်းသိပေမဲ့ ကူညီလိုက်တာ````ကျွန်တော်တို့ မှားခဲ့ပါတယ် ဒေါက်တာ၊ အဲဒီဟန်းချိန်းလေးကို စမြင်လိုက်ကတည်းက ရင်တွေတုန်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ဟာပါ````မင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြုအမူကျ မေ့လျော့နေတယ်။ ဒီနေ့ မင်းတို့ခံရတဲ့ အလှည့် အသည်းဆတ်ဆတ်ခါနာကြတယ်။ မင်းတို့ ဝဋ်လညတာ ပါးပါးလေးပါ။ ဒါကို ထပ်ပြီး လက်စားပြန်ချေအုံးမယ်ဆိုရင် ဒီသံသရာထဲက မင်းတို့ ထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလဲ ဘယ်တော့မှ မွေးမြူနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီဟန်းချိန်းကို မင်းတို့ကို လက်စားချေဖို့ သိမ်းထား မဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့ကျရင် ပြန်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်နေတယ်။ ဒီနေ့ မထင်မှတ်ဘဲ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ မင်းတို့ကိုလာတွေ့ရတယ်။ မင်းတို့ကို လွယ်လွယ်ကူကူတော့ အိမ်ပြန်မပို့ပေးနိုင်ဘူး။ မင်းတို့ဆီက ကတိတစ်ခုတော့ လိုချင်တယ်။``ကောင်လေးနှစ်ယောက် ပျာပျာသလဲဖြစ်သွားတယ်။ နှစ်ယောက်သား လက်အုပ်ချီပြီး ကျွန်မကို တောင်းပန်တယ်။ ကျွန်မဆီက ဘာကတိဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေးဖို့အာမခံတယ်… ``ကောင်းပြီလေ၊ ကျွန်မလိုချင်တာက ဒီလို လမ်းပေါ်မှာ တေလေမနေဘဲ ခုလိုအပြုအမူစိတ်ရိုင်းတွေကို ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာပဲ````ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ကတိပေးပါတယ် ဒေါက်တာ````မင်းတို့ ဘာလုပ်လဲ````နှစ်ယောက်လုံး အီကိုနဲ့ကျောင်းပြီးထားပါတယ်။ ဘာမှတော့ မလုပ်သေးပါဘူး````စီးပွားရေးပညာရှင်တွေပဲ ဒီအတိုင်းနေသွားရင် ဘာထူးမှာလဲ ပညာသင်ပြိးတော့ ````ကျွန်တော်တို့ မိဘစီးပွားရေးကို ဆက်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်````အေး… ကောင်းပြီ ပြီးစလွယ်တော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့၊ ကဲ နောက်နေ့ မင်းတို့ ဆေးခန်းလာပြအုံး အိမ်လိုက်ပို့ပေးမယ်.. သွားကြစို့``အပြန်လမ်းမှာတော့ အသံလေး တွေ တိတ်ဆိတ်စွာပါလာကြတယ်။ ခုလိုကျတော့လဲ စာမရတဲ့ကလေးတွေ ဆရာမရှေ့မှာ ကြောက်နေကြသလိုဘဲ။ ``ဒေါက်တာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုခေါင်တဲ့နေရာမှ ဆေးခန်းဖွင့်တာလဲ``ရဲရင့်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက စပ်စုသလို မေးတယ်။``မြို့လယ်မှာ ဒီလောက် ဆေးခန်းတွေ ပေါများနေတာ။ ထပ်နေတာပဲ။ ဒီလိုလူနည်းပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ရပ်ကွပ်မှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို အသက်ကယ်တဲ့ ကယ်တင်ရှင်တစ်ယောက်လို အားကိုးကြတာ၊ သူတို့ နွမ်းပါးမှုအတွက် ကျွန်မ ပိုက်ဆံ မတက်နိုင်သူတွေကို မယူပါဘူး။ စေတနာနဲ့ ကုပေးတယ်။````ဒေါက်တာက အရမ်းလေးစားဖို့ ကောင်းတာပဲ````မင်းတို့ ဒီနေ့လို အဖြစ်အပျက်မျိုး ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မလို အဖြစ်အပျက်မျိုး ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတာ ပေါ်လာလိမ့်မယ်````သေချပါတယ်၊ ဒေါက်တာ အခု ဒေါက်တာရဲ့ အပြုအမူအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် နောင်တရစေပါတယ်။ ရှက်ဖို့လဲ ကောင်းတယ်````ကျွန်တော်တိုက ကတိအထပ်ထပ်ပေးပါတယ်။ လိမ်လိမ်မာမာ နေပါတော့မယ်````အိုကေ ဒီလမ်းက မင်းတို့ပြောတဲ့ လိပ်စာလား````ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့က တစ်လမ်းထည်း နှစ်အိမ်ကျော်တင်ပါ`` ``မင်းတို့ မိဘတွေကို မညာပါနဲ့။ အမှန်အတိုငး ပြန်ပြောလိုက်ပါ````ဟုတ်ကဲ့ ဒေါက်တာ အိမ်ထဲဝင်ပါအုံး````မဝင်တော့ဘူး နောက်က နေပြီ``သူတို့ကို ပို့ပြီး အိမ်ပြန်ေ၇ာက်တော့ ညရှစ်နာရီ ထိုးနေပြီ။ မေမေ စိတ်ပူစွာနဲ့ လူနာတွေများနေလို့လားတဲ့။ ကျွန်တော့် ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာရယ်မှန်းမသိ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲမှာ သုံးနှစ်တိုင်တိုင် ရှိခဲ့တဲ့ ဟန်းချိ်န်းလေး ၊ ခုတော့ သူ့ပိုင်ရှင်ဆီရောက်သွားပြီ။ ကျွန်မ ပြုံးမိသွားတယ်။ (၂)လက်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဖိတ်စာလေးတစ်စောင်ကြောင့် အံ့သြသွားတယ်။ ကျွန်မအပြင်သွားနေတုန်း ကောင်လေးနှစ်ယောက် လာပေးသွားတာတဲ့။ ဖိတ်စာက အလှူဖိတ်စာ၊ ရဲရင့်နဲ့ နေမိုး သင်္ကန်စီးကြမယ်။ ရဲရင့်နဲ့ နေမိုးက ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲတော်ကြောင်းသိရယတ်။ မေမေမက သူမသိတဲ့သူတွေမို့ ဘယ်သူတွေလဲမေးတယ်။ ကျွန်မက ဇာတ်လမ်းစုံပြောပြမှ အံ့သြစွာနဲ့ ဒီကလေးတွေလားဆိုပြီး ရေရွတ်နေပြီး လိမ္မာသွားကြတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဆေးခန်းပိတ်ချိန်မှာ ရောက်လာတက်ပြီး ကူညီပေးကြတယ်။ မင်းတို့ဟာ မြစ်နှစ်စင်းနဲ့ တူတယ်။ အမှိုက်သရိုက်ကင်းကင်းနဲ့ အမြဲစီးဆင်းနေစေချင်တယ်။…သိမ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ဦးပဉ္ဇင်းနှစ်ပါးနဲ့အတူ တခြားရဟန်းတွေလဲ တန်းစီပြီး ဆင်းလာကြတယ်။ ခုတော့လဲ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ အင်မတန်ဖြူစင် အပြစ်ကင်းပြီး ကျက်သရေ ရှိလို့ ကျွန်မက စာအိတ်ပေါ်မှာ ဒေါက်တာ ``မြင့်မြတ်တော်ဝင်``ဆိုပြီး ဝတ္ထုငွေစာအိတ်လေးတွေကို သပိတ်ပေါ်မှာ ကပ်လိုက်တယ်။ မျက်လွှာလေး ပင့်ာကည့်တယ် ဆိုရုံလေးကြည့်ပြီး သူတို့တွေ ကျွန်မ လာတာကို ကျေနပ်သွားကြဟန်ရှိတယ်။ တရွေ့ရွေ့တန်းစီပြီး ဆွမ်းစားဆောင်ဘက် ထွက်သွားတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မလက်အုပ်ချီမိတယ်။ ရင်ထဲက လှိုက်တက်လာတဲ့ ခံစားမှု ပီတိအဟုန်က ပြင်းထ်လွန်းတာမို့ မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းတက်လာတယ်။ဒါကို ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ပါဘူး….။ ပန်းအလင်္ကာ May 2007ချောအိမာန်(မန္တလေး)
သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်မှာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ခဲ့တာတောင် အမှတ်အသားမယူဘဲ ခွင့်လွှတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုနစ်နာစေခဲ့သူတွေကို လိမ္မာလာအောင် ပြန်ကူညီဖေးမလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာမြင့်မြတ်တော်ဝင်လို လူမျိုးက လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်.. ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတာဘဲနော်.. ကျွန်မလဲ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင်တောင် ဥပက္ခာတော့ ပြုလိုက်မိတယ်.. စိတ်ထဲကြာရှည်သိမ်းဆည်းရတာ ပင်ပန်းလို့... အင်းနော်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါဘဲ. ကြိုးစားရဦးမယ်..
ပို့စ်လေး ကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း။ဘယ်ကိစ္စ မဆို အပြစ်လုပ်ထားသူကို လုပ်ထားတယ် ဆိုပြီး သိအောင် ပြောဖို့လည်း လိုသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ သူ့ကို လိုတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်အောင် ပြောသင့်တာပေါ့း။ သဘောကျပါတယ်။ အဟုန်တော့ နည်းနည်းမြန်တယ်။